राजनीतिमा ‘३ प’को सिद्धान्त र नेतालाई सोध्नुपर्ने तीन प्रश्न
बाबुराम ढकाल मंगलबार, माघ २०, २०७७ मा प्रकाशित
दुनियांलाई भ्रममा पार्न विधि र प्रकृयाको दुहाई दिंदै जति आरोप प्रत्यारोप गरिए पनि अहिलेको नेपाली राजनीतिको अस्थिरता प्रधानमन्त्री केपी ओली, पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपालको चरम सत्ता लिप्साको परिणाम हो भन्नेमा शायद कसैलाई भ्रम छैन । राजनीतिक अस्थिरताको शुरुवातसंगै ढिलो चांडो निर्वाचन हुने नै छ । त्यस अगाडि नै नेताहरु सर्वसाधारण नागरिक र पार्टी कार्यकर्ताहरुलाई आ–आफ्नो गुटमा तान्न मरिमेटेर लागिरहेका छन् ।
यो कुनै एउटा पार्टीको कुरा मात्रै होइन, विभाजन हुंदै गरेको नेकपा होस् कि कांग्रेस वा राप्रपा र आफूलाई वैकल्पिक धारको राजनीति गर्ने दावि गरिरहेको साझा पार्टी नै किन नहोस्, सबैको अवस्था लगभग उस्तै छ । नेताहरु अनेक वहाना बनाएर जनताको घरदैलोमा आउन थालेका छन् । सिद्धान्तका ठेलीहरु जति फरक भए पनि, व्यवहारमा नेपालका अहिलेका राजनीतिक पार्टीका अधिकांश नेताहरुको नियत र हैसियत उस्तै देखिएको छ । पार्टीकोे सिद्धान्तमा जे जे लेखिए पनि प्रायः सबै पार्टीका अधिकांश नेता–कार्यकर्ताहरु ‘पद–पैसा–परिवारको सिद्धान्त’बाट प्रेरित छन् । यो सिद्धान्तको परिपूर्तीको लागि उनीहरु कुन हदसम्म जान सक्छन् भन्ने कुरा अहिलेका ‘ठूला नेता’हरुको कार्यशैली र हैसियतले स्पष्ट पार्छ ।
यसरी गरौं परिस्थितिको विश्लेषण
भनिन्छ यसै पनि राजनीति धुर्तहरुको पेशा हो । त्यहां इमान्दार र नैतिक व्यक्तिहरु टिक्न र अगाडि बढ्न सक्दैनन् । अपवादमा वाहेक त्यस्तो देखिंदै पनि आएको छ । नेपालमा मात्र होइन, विश्वका जुनसुकै देशको राजनीतिमा पनि इमान्दार र नैतिकवानहरु अगाडि बढ्नै सक्दैनन्, कथंकदाचित अगाडि बढे भने उनीहरु त्यो ठाउंमा टिक्नै सक्दैनन् । धेरै कुरा गर्नै पर्दैन, डा. केआई सिंह, टंक प्रसाद आचार्य, विपी कोइराला, गणेशमान सिंह, मनमोहन अधिकारी र मदन भण्डारीहरुको निष्ठाको राजनीति र उनीहरुले भोग्नु परेको नियतिको अध्ययन गर्ने हो र अहिलेको राजनीतिका खेलाडीहरुको अनुहार सम्झने हो भने धेरै कुरा छर्लंङग हुन्छ । नेपालका नेताहरुको नियत, हैसियत र जनताको मनोकांक्षाको नियती बुझ्न सकिन्छ । इमान्दारहरु माथि पुग्नै नसक्ने, पुगे पनि टिक्नै नसक्ने नियतिलाई बुझेर आम नेपाली जनताहरु अब नेताहरुको वहकाउमा परेर होइन कि परिस्थितिको गंभिर विश्लेषण गरेर आवश्यक निकर्षमा पुग्नु जरुरी छ । त्यसको लागि आफूलाई ‘कन्भिन्स’ गर्दै पार्टी वा गुटमा सक्रिय हुन वा चुनावमा मत दिन आग्रह गर्ने नेताहरुलाई ३ वटा प्रश्न गरौं । त्यसको यथार्थपरकरुपमा चित्तबुझ्दो जवाफ पाए बल्ल त्यो नेतालाई समर्थन गरौं, होइन भने हामी ‘सार्वभौम सत्ता सम्पन्न लोकतान्त्रिक मुलकका नागरिक हौं’ भन्ने कुरालाई आत्मसाथ गर्दै नेताहरुलाई ‘ऐना’ देखाइदिउं ।
नेताहरुलाई सोध्नु पर्ने तीन प्रश्न हुन्:-
१. देशको लागि के गर्नु भयो ?
राजनीति भनेको समाजसेवा हो । राजनीतिमा लाग्ने जो सुकै नेता कार्यकर्ताले पनि देश, समाजको लागि उल्लेख्य योगदान गर्नै पर्छ । निश्चय पनि पदिय हैसियत अनुसार माथिल्लो पदमा पुगेका ठूला नेताहरुले देश र समाजको लागि धेरै काम गर्न सक्छन्, गर्नु पर्छ भने तल्लो तहका नेताहरुले त्यही अनुसार काम गर्छन्, गरेकै हुनु पर्छ । त्यसैले कुनै पनि सार्वजनिक ओहोदाको पद अर्थात् राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, आयोगका पदाधिकारी, कुनै संस्थाको संचालक आदी पदमा पुगेको नेताले उसको हैसियत र कार्य क्षेत्र अनुसार के कति काम गरे ? त्यसको विवरण माग गरौं । जुन नेताले आफूले देश र जनताको लागि गरेका उल्लेख्य कामहरुको विवरण दिन सक्छ, उसैलाई समर्थन गरौं । होइन भने जुनसुकै गुट र पार्टीको भए पनि त्यसलाई वहिस्कार गरौं ।
२. पार्टीको लागि के गर्नु भयो ?
अपवादमा ‘स्वतन्त्र’ले जित्ने वाहेक लोकतान्त्रिक मुलुकमा व्यक्तिको छनौट पार्टीले गर्छ, गर्नु पर्छ । भलै नेपालमा कसरी छनौट हुन्छ भन्ने आफ्नो ठाउंमा छ । तर, जसरी छनौट भए पनि उ पार्टीको प्रतिनिधि हो र उसले आफूले पाएको जिम्मेवारीलाई पार्टीको नीति अनुसार कार्यान्वयन कति गर्यो भन्ने मुख्य प्रश्न हो । कुनै पनि तहमा जिम्मेवारी पाउने व्यक्तिले त्यो क्षेत्रमा पार्टीको नीति कार्यान्वयन गर्न सक्दैन उ असल नेता हुनै सक्दैन । त्यसैले जुनसुकै पार्टीको, जो सुकै नेता भए पनि भेट्नासाथ उस्लाई उस्को जिम्मेवारी र त्यो क्षेत्रको विकासको लागि सम्वन्धित पार्टीको प्रतिवद्धता स्मरण गराउंदै त्यसबारेमा प्रश्न गरौं । ‘यो मान्छे मेरो पार्टी वा गुटको नेता हो’ भन्ने मानसिकताबाट प्रेरित भएर होइन कि नेपाली नागरिकको हैसियतले ‘तपाईले नियुक्ति पाएपछि पार्टीले के पायो ?’ भनेर प्रश्न गरौं । तर्कसंगतरुपमा जवाफ नपाएमा त्यो नेता हैसियत नभएको र भ्रष्ट हो भन्ने निश्चिन्त होउं । त्यस्तालाई सकेसम्म जहांबाट जसरी सकिन्छ, त्यहांबाट हराउने प्रयास गरौं ।
३. आफू र परिवारको लागि के गर्नु भयो ?
कुनै व्यक्तिले कुनै सरकारी नियुक्ति पाउनु भनेको स्वंय उसको लागि र परिवारकै लागि पनि महत्वपूर्ण हुन्छ । त्यो पदमा पुगेपछि उसले आफ्नो र परिवारको हितको लागि प्रकृयासंगत पाउने लाभ वाहेक असंगतरुपमा के कस्ता फाइदा लिएको छ ? त्यसबारेमा पनि जानकारी लिएर प्रश्न गरौं । जुन नेताले आफूले पाएको पदको गरिमा राख्न सक्दैन, प्रतिष्ठा राख्न सक्दैन र केवल पैसा र परिवारको स्वार्थको लागि उपयोग गर्छ, त्यो अल नेता हुनै सक्दैन । त्यस्ता नेतालाई गुट र पार्टी हेरेर होइन, तिनको अनुहार भित्रको भ्रष्ट आचरण सम्झेर वहिस्कार गर्न थालौं ।
नेपालको विकास गर्ने हो, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्य मान्यताको प्रवद्र्धन गर्ने हो भने झिनो स्वार्थको पछाडि लागेर, गुटको चास्नीमा डुबेर नेताहरुको जयजयकार गर्ने होइन, प्रश्न गर्ने र तथ्यगतरुपमा जवाफ खोज्ने बानीको विकास गरौं । जुनसुकै पार्टी र गुटका भए पनि असल नेतालाई प्रोत्साहित गरौं र खराब तथा प्रश्नको जवाफ दिन नसक्ने नेता–कार्यकर्ताहरुलाई वहिस्कार गर्न शुरु गरौं । अनि बल्ल देश लोकतान्त्रिक विधिबाट समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढ्नेछ ।